FANAFIHAN-DAHALO TAO AMBATOBOENY : Mpanara-dia iray namoy ny ainy, omby 25 voaroba
Nitrangana asan-dahalo indray tao amin’ny Fokontany Antsirinakanga, Kaomina Ambanivohitr’Anjiajia, any amin’ny Distrikan’Ambatoboeny ny faran’ny herinandro lasa teo. 3 décembre 2012
Dahalo miisa 6 niaraka tamin’ny basim-borona no nanafika ny tanàna tokony ho tamin’ny 11 ora sy sasany alina. Omby 25 no lasan’izy ireo tamin’izany.
Niezaka nanara-dia ny fokonolona sy ny zandary taorian’ny fanafihana saingy mbola tsy nahitam-bokatra aloha izany hatramin’izao. Araka ny loharanom-baovao dia nandritra io fanafihan’ny dahalo io ihany dia niezaka nanohitra ny fokonolona, ka iray tamin’izy ireo no namoy ny ainy vokatry ny fifandonana.
Nihemotra avokoa ireto fokonolona ireto raha vao nahita ny namany lavo tamin’ny tany, ka niantso ny mpitandro filaminana eo anivon’ny zandary.
Nitrangana halatr’omby ihany koa ny tao amin’ny Fokontany Befamatanana ao amin’ny Distrikan’Ambatoboeny ihany ny faran’ny herinandro teo, ka dahalo roa lahy nitondra basy poleta vita gasy no nangalatra omby roa. Mbola tsy hita ireo omby ireo amin’izao fotoana izao.